Naya Post Nepal | दुई इ’न्जि’नि’यरको मृ’त्युको कारण खो’ज्दै मन्त्रालय, सुरक्षा मापद’ण्डवारे उठ्यो यस्तो प्रश्न.
दुई इ’न्जि’नि’यरको मृ’त्युको कारण खो’ज्दै मन्त्रालय, सुरक्षा मापद’ण्डवारे उठ्यो यस्तो प्रश्न.
काठमाडौ । सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना प’रिक्षणका क्र’ममा भएको दु”र्घटनामा दुई जना इन्जिनियरको मृ”त्यु भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले छा’नबिन समिति ग’ठन गरेको छ। इन्जिनियरहरुलाई कस्तो अवस्थामा काममा लगाइएको थियो, सुरक्षा मापदण्ड कस्तो थियो भन्ने विषयमा म’न्त्रालयले अ’नु सन्धान गर्दैछ ।
मन्त्रालयले मंगलबार घ’टनाको स’त्यतथ्य प’त्ता लगाउन सहसचिव चि’रञ्जीवी चटौतको सं’योजकत्वमा छा’नबिन समिति समिति गठन गरेको हो। समितिले का’म थालेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्र साद भेटुवालले समिति गठन भएको र त्यसले भ’विष्यमा यस्ता घ’ट ना दोहोरिन नदिन का’र्यविधि ब’नाउने जानकारी दिएका छन् ।
‘यो घटना के कति कारणले घ’ट्यो भनेर वि’स्तृत अ’नुसन्धान गरिने उनले बताए । घ”टना अनुसन्धान पछि आएको रिपोर्ट अनुसार माप दण्ड बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । आइतबार अ”पराह्न आयोज नामा कार्यरत् इन्जिनियर धुलिखेल नगरपालिका(४ का २९ वर्षीय अर्जुन थापा र अछाम साँफेबगर(२ का २६ वर्षीय सु’वासराज रेग्मी को मृ”त्यु भएको थियो।
आयोजनाको पाइपलाइन प’रीक्षण गर्ने क्रममा अगाडिको वल्डिङ वि स्फो ट भएर थापा र रेग्मीको मृत्यु भएको प्रा’रम्भिक रि’पोर्ट भए पनि त्यसबारे विस्तृत अ’नुसन्धानका लागि समिति बनाइएको हो ।
तर, मापदण्डअनुसार पाइपलाइन बने नबनेको र पानी परीक्षणभन्दा अ’गाडि पाइपलाइन के कस्तो छ जाँच गरिएको नगरिएको, सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको छ छैन सबै विषयमा समितिले काम गर्ने बताइ एको छ । इन्जिनियरहरूको नि’यामक निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले भने यो घ’टनाको स’त्यतथ्यबारे बुझ्ने काम भइरहेको ब’ता एको छ
२०७८ पुष १३, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 363 Views